XOG:- Xil ka qaadis lagu sameeyay C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xil ka qaadis lagu sameeyay C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon
Xog ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa waxay sheegaysaa in amar kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre xilkii looga qaaday afhayeenkii xukuumadda C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon.
C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo wiil dhalinyaro ah, islamarkaana muddo kooban soo shaqeeyay ayaa la sheegayaa in xil ka qaadistiisa lasoo faray C/laahi Xaamud oo ah wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale, xil ka qaadista C/casiis Goobdoon ayaa waxay qeyb ka tahay isbadelka maalmihii ugu dambeysay lagu sameeynayay mas’uuliyiintii hore ee lasoo shaqeeysay dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa inuu dhawaan soo magacaabo booska uu haatan banneeyay afhayeenkii hore ee xukuumadda C/casiis Cabdi Xaaji Goobdoon.
Illaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay xil ka qaadistaan lagu sameeyay C/casiis Goobdoon, waxayna arrintaan walwal ku riday mas’uuliyiinta hore oo weli xilalka ka haaya dowladda Soomaaliya.